Ndege itsva kubva kuSan Jose kuenda kuPalm Springs paAlaska Airlines
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege itsva kubva kuSan Jose kuenda kuPalm Springs paAlaska Airlines
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Ndege itsva kubva kuSan Jose kuenda kuPalm Springs paAlaska Airlines.
Kuchengetedza sevhisi isina kumira mushe kuSan José kwave kukoshesa kuPalm Springs International Airport, sezvo San José, pamwe nedzimwe nzvimbo dzeBay Area, inzvimbo yepamusoro yevagari nemabhizinesi muCoachella Valley.
Kubva nhasi, vafambi vanogona kunakidzwa kwegore rose, sevhisi isingamire pakati peMineta San José International Airport (SJC) uye Palm Springs International Airport (PSP), Nemhaka Alaska Airlines.
Ndege dzemazuva ese dzinosimuka kuMineta San José na8:10 am, dzichisvika Palm Springs 9:30 mangwanani asati asvika, zuva nezuva. Kune avo vari muPalm Springs, ndege yemazuva ese kuenda kuSan José inosimuka na10:10 am
"Nonstop sevhisi kuPalm Springs yanga iri nzira inokumbirwa zvikuru kwemakore akati wandei," akadaro John Aitken, SJC Director weAviation. "Kubatana uku pakati peSilicon Valley neCoachella Valley chiratidzo chinonakidza chekupora, uye matunhu ese ari maviri achabatsirwa nebasa remazuva ese."
“Kuwana basa risingamire kuSan José kwave kuri mutengoority yePalm Springs International Airport, "akadaro Ulises Aguirre, Executive Director weAviation yeGuta rePalm Springs. "San José, pamwe nedzimwe nzvimbo dzeBay Area, inzvimbo yepamusoro yevagari nemabhizinesi muCoachella Valley uye tinotenda Alaska Airlines yekubatanidza PSP kuSJC."
Kubhururuka kwemaminetsi makumi masere kunoshanda mundege yeEmbraer 80, ine zvigaro makumi manomwe nematanhatu; 175 mubhizinesi uye 76 mune zvehupfumi.
Kutangwa kwesevhisi kunotanga nguva yezororo rekutenda yekutenda, iyo inotanga nhasi, Mineta San José International ichitarisira 400,000 vafambi kusvika kupera kwesvondo rinouya.